Human Rights Watch oo ciidamada Kenya ku eedeeysay tacaddiyo ay u geysteen dad rayid ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 20 July 2016
Warbixin ay soo saartay Hay’adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxa ay ku sheegtay in ciidamada Kenya ay ku kaceen gabood fallo ka dhan ah bani’aaddanimada, labadii sano ee u dambeeyay intii lagu guda jiray howllgallo ciidamada ay ka sameeyeen gobolka Waqooyi bari iyo Magaalada Nairobi.
Waxa ay sheegtay Hay’adda in la dilay dad badan, sidoo kalane la afduubay 34 Qof, oo lagu qabtay howlgallada laga sameeyay deegaannadaasi, kuwaasi oo ilaa hadda aan meel lagu sheegin nolol iyo geeri.
Cabdi Barre, Maxamed ayaa la sheegay in meydkiisa laga helay meel qiyaastii 18 Kiilo Mitir u jirta Magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi bari, kaasi oo bishii Augost 2015 ay ciidamada ka qabteen meel ka baxsan Gurigiisa.
Eedeynta Human Rights Watch oo ka kooban 87 Bog ayaa intaasi ku dareysa in muddadii dambe ay sii kordheysay qabqabashada dadka looga shakiyo Al Shabaab ee la dilo, iyaga oo aan Caddaalada marin kadibna iyada oo aysan ka warqabin Ehaladooda.
Hay’adda ayaa xustay in ka badan 8 bil ay wadday baaritaanka kiiskaan, oo laga fuliyay goobaha ay tacaddiyadu ka dhaceen ee Nairobi, Gaarisa, Wajeer iyo Bandheera, iyada oo wareysatay 117 Qof oo isugu jira dhibbanayaal, goob joogayaal, Qareenno, Wariyayaal, Ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo Saraakiil ka tirsan Dowladda Kenya.
Ma ahan markii ugu horreysay oo Hay’adda xuquuqda aadanaha ay Ciidamada Dowladda Kenya ku eedeeyso dambiyo gabood fal ah, iyada oo howlgallada ciidamada ay sii kordheen, tan iyo markii ay bateen Weerarrada qorsheysan ee ka dhacaya Dalkaasi.
Somaliland over run Sanaag captured Puntland Lawmaker with his guards